सिक्किममा तीनदिने ‘दलित र सबाल्टर्न’ संगोष्ठी- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
वैशाख २४, २०७९ मनोज बोगटी
सिक्किम — आधुनिक भारतीय नेपाली साहित्यमा दलित र सबाल्टर्न शीर्षकमा सिक्किमको नाम्ची महाविद्यालयले तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठी सञ्चालन गरेको छ । भारत सरकारको मानव संसाधन विकासको प्रकल्प राष्ट्रिय उच्चतर शिक्षा अभियानले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा तीन दिनमा ६ वटा प्राविधिक सत्र चलेको थियो ।
नेपालका समालोचक गोविन्दराज भट्टराईले प्रमुख वक्तव्य दिएका थिए । सबाल्टर्न र दलित अध्ययन सम्बन्धमा राखेको वृहत् संगोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भने‚ ‘अबको बेला भनेकै पुराना कुरालाई स-सम्मान फुकाएर नयाँ दिशातिर लैजानुपर्ने बेला हो । हाम्रा सिर्जनाहरूलाई विश्वमा कुन र कस्ता दृष्टिकोणबाट देखाउने त ? अब त्यसको सम्भावना र सिद्धान्त बनाउनु अनिवार्य छ। त्यसको सुरुवात सिक्किमबाट भयो ।’
आयोजकको पक्षबाट नाम्ची कलेजका प्राचार्य दीपक तिवारीले भने, ‘किनारका सन्दर्भलाई केन्द्रमा ल्याउने र डिस्कोर्स निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हो। नेपाल र भारतबाट लेखिने नेपाली साहित्यमा कहिलेकाहीं अवधारणागत विरोधाभास देखिन्छन् । त्यही संशयहरू केलाउने अभ्यास हो ।’
कवि मनप्रसाद सुब्बाले विषयको चुरो खोले । उनले सबाल्टर्न चेतनाको निर्माणमा सामाजिक परिवेश, राज्य-व्यवस्था, सत्ता र शक्ति-केन्द्रको सोझो हात रहने बताए ।
‘भारत र नेपाल दुवैतिरका समाजमा जात, व्यवसाय, लिंग र अन्य आधारमा हुने गरेका विभेदकारी कारकका आधारमा नै दलित विमर्शको स्वरूप चिन्ने हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ११:१८
कठपुतलीहरुको आफ्नो नियति हुँदैन । आफ्नो नभएको दुःख जब तपाईंलाई आफ्नै भनेर स्विकार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पीडा बोल्ने शब्द रहेछ– ओक्के छ त !
माघ १५, २०७८ मनोज बोगटी
प्रेम कहाँ, कतिखेर, कसरी पर्छ, यसको पनि भूगोलअनुसार अनुशासन हुँदोरहेछ, लेखक बसन्त बस्नेतको उपन्यास पढेर पाठकलाई यस्तो लाग्न सक्छ । यसो त सेक्मुरीमा भमरा बस्ला नै, यो बायोलजिकल सत्य हो । मेलामा रल्लिएका ती युवक–युवतीहरूले भुनभुन नगरेका हुँदा हुन् त, पखेटा काटिएको, उम्रिएको र पर्खिएको नेपाली ६० को दशकको, चिथोरिएको समयको उहापोह कसरी चिन्न सक्नु ?
दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा युटर्न आउने नै भयो । इतिहासमा आएको यो अचानकको आँधीमा डुक्पाजस्ता फेदका मान्छेले धेरै गुमाउनुपर्छ । ‘महाभारा’ को कथा त्यही गुमाउनुपर्ने वास्तविकताको वरिपरि घुमेको छ । लेखनमा टाइम र स्पेसको बढो महत्त्व हुन्छ । खासगरी आख्यानमा आउने टाइम–स्पेस भनेको लेखकले लेखन मार्फत दिन खोजेको विचारका लागि चाहिने टुल्स (औजार) हो । दरबार काण्डअघि समाजमा जुन रूपान्तरणको सपना थियो, काण्डपछि त्यो रहेन । उपन्यासले भन्न खोजेको यत्ति हो । चीजहरू बदलिइरहन्छन् । त्यसको पछिल्तिर ठूलो चलखेल हुन्छ । लेखकले कुन समय–चेतनामा कुन चलखेल पस्किने भन्ने तय गर्छ । बसन्त त्यही अनुशासनमा छन् ।
हुन त उहिल्यै सेक्सपियरले भनेका छन्– नाममा के छ ? तर, नाममा के हुँदैन ? कमजोरभन्दा कमजोर पाठकलाई पनि ‘पाठ’ को आस्वादनपछि उपन्यासको नाम ‘महाभारा’ होइन, ‘महाहारा’ हुनुपर्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । दार्जिलिङसित कुम जोडेको ‘महाभारा’ भित्र बाँचिरहेका, मरिरहेका, लडिरहेका, उठिरहेका मानिसहरूको कथा कस्तो हुन्छ ? पत्रकारितामार्फत राजनीति र समाजसित खाइखेली हुर्किएका बसन्तलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर, उपन्यासमा जितेका कसैले छैनन्, सबैले हारेका छन् । भन्न सकिन्छ यसलाई ‘महाहारा’ उपन्यास ।
न कटकहरूले जित्यो, न डुक्पाले, न सुक्मतीले, न तान्छोहाङले, न मेरिनाले ! जित्ने कोही छैनन् । फेरि पनि कसरी ‘ओक्के छ त ?’
लेखकले जुन विशाल पर्दामा फेदका मानिसहरूको चलचित्र कुँदेका छन्, त्यो साँच्ची नै ओक्के छ त ?
तपाईं संघर्षले पिल्सिनुभएको छ, दुख्दै, जल्दै बसिरहनुभएको छ, लड्दै–उठ्दै गरिरहनुभएको छ, बारम्बार हारिरहनुभएको छ, अंकुसेमा पर्नुभएको छ, जालोमा बेह्रिनुभएको छ, चेप्टिनुभएको छ– यस्तो हुनु तपाईंको आफ्नै नियति होइन । कठपुतलीहरूको आफ्नो नियति हुँदैन । तर, पाठकलाई लाग्न सक्छ, आफ्नो नभएको दुःख जब आफ्नै भनेर स्विकार्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पीडा बोल्ने शब्द बन्न सक्छ– ओक्के छ त !
आफ्नो नभएको युद्ध जब आफ्नै भनेर लड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सकस बोल्ने शब्द बन्न सक्छ– ओक्के छ त ! आफ्नो नभएको जीवन जब आफ्नै भनेर जिउनुपर्ने हुन्छ, त्यो बाध्यता बोल्ने शब्द बन्न सक्छ– ओक्के छ त !
लारुम्बाभित्र जब नवधनाढ्य छिर्छ, महत्त्वाकांक्षा छिर्छ, आसक्ति छिर्छ, धर्म पनि व्यापार बन्छ, राजनीति पनि व्यापार, उमेर पनि व्यापार बन्छ, शिक्षा पनि व्यापार । क्रान्तिभित्र जब प्रेमासक्ति छिर्छ, तब सपना पनि गद्दार बन्छ । मिङ्सो र गुराँसले त्यही बताउँछन् । आफूलाई चिन्नु सबैभन्दा गाह्रो विषय हो, तर जसले पनि आफूलाई चिन्छ, त्यो कसैको लिसोपासोमा पर्दैन– तान्छोहाङले त्यसै भन्छ । कमजोरीहरूलाई पनि जसले प्रेम गर्छ, त्यसको आँखाबाट सपना लुटिन्छ– सुक्मतीले त्यही भन्छे । विद्रूप समयको चक्रवातमा परेपछि ‘जिम्मेवारी’ ले हन्डर खान्छ । महत्त्वाकांक्षा भनेको भारी हो, जसको काँधमा यो पर्छ, त्यो गधा बन्छ– डुक्पाले शिक्षकको अनुहारमा मोसो दलेर चिच्याईचिच्याई यही भन्छ ।
मानिस भनेकै राजनीतिक पशु हो भनिन्छ । जगजाहेर छ, पशुहरू कुनै पनि बुद्धिमानी दार्शनिकले ‘कोइन’ गरेको ‘अनुशासन’ पालन गर्दैनन् । पशुहरूको ज्ञान–शाखा मौजुदा संक्रमण र अन्तरविरोधले तयार पार्छ । मानिसले निश्चित समयमा सोचेको कुरा, निश्चित समयसम्मै सीमित बन्छ । त्यो स्थायी हुँदैन । त्यसैकारण क्रान्तिहरू विचलनमा परेका छन् । समाजवादीहरू विशृंखलित बनेका छन् । मार्क्सवादीहरू धर्मरमा परेका छन् ।
पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो । आत्मनिर्णयको अधिकार सबै नागरिकसँग हुन्छ भनेर दार्जिलिङका गोर्खाहरू लडिरहेका थिए । पहिचानको लडाइँलाई कम्युनिस्ट पार्टीले विच्छिन्नतावादी भनिदियो ।
बंगालबाट चुँडेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बनायो भने कंग्रेसले हल्ला फैलाउने भयो– यो कम्युनिस्ट पार्टी ‘बंगाल विभाजनकारी’ हो । अंग्रेजले छाडेर गइसकेपछि अंग्रेजको ठाउँमा बंगाली प्रशासक आए । उनीहरू भन्थे– दार्जिलिङ बंगालको सुनको मुकुट हो । बंगालका मेजोरिटी भोटरले पाएको शिक्षादीक्षा त्यही थियो । माकपालाई बंगालमा सत्ता लामो तन्काउनु थियो । त्यसपछि ज्योति बसुले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन दबाए । संविधानले सीमा खिचेर बनाएको राज्य संस्थान त जनताका लागि हो । तर, जब बीचमा सत्ताको वर्चस्वको सवाल आयो, जनता पनि वर्गीय बने । ज्योति बसु न राज्यको बंगाली जनताका लागि लडेका हुन्, न उनले गोर्खा जनतालाई शोषण गरेका हुन् । गरेको त त्यही सत्ताको बचाउको राजनीति मात्रै हो ।
यसैले ‘महाभारा’ पढ्दैगर्दा मैले त्यहाँभित्र रुमल्लिएको क्रान्तिपथ, त्यहाँका नागरिकले देखेका सपना, आन्दोलनकारीका प्रतिबद्धता, सेनाको क्रुरता, धर्मको मलिनता, समाजको बुनोट, समानताको लक्ष्य, बराबरीको न्याराटिभ, चेतनाको बाटो दुर्घटनामा पर्ने छनक पाइसकेको थिएँ ।
लेखकले बेस गरे– समुद्रको पानी अञ्जुलीमा उघाए र तिर्खा लागेकाहरूलाई पिलाए । कसलाई थाहा छैन र सबैको तिर्खा एकसाथ मेटिँदैन । न त लेखकले नै अञ्जुलीमा समुद्रको नीलो उघ्याउन सक्छन् । तर, लेख्नु भनेको क्यामेरा छ भन्दैमा त्यसै ख्याच्याक्क फोटो खिच्नुजस्तो पनि होइन । वैचारिक आगो दिमागमा खेलाइरहनेहरूले अँध्यारोमा एक सिन्का सलाईको काँटी त कोरिराखेकै बेस हो भनिन्छ । कतैतिर अलिकति झिलिक्क बलिहालेको पो छ कि ? लेखकले कहाँ सलाईको काँटी कोरिराखेका छन्, म त्यही खोजिरहेको छु । नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, सत्ता, पार्टी, सामाजिकता जम्मै दिमागमा राखेर खोजें भने म त्यो झिल्को पाउँछु पनि होला । तर, किताब पढिसकेर पनि म त्यो झिल्को भेटिरहेको छैन । सम्भावना, आशा र भविष्यको किटान यो उपन्यास पढेर मैले अनुमान गर्न सकिरहेको छैन । सायद म कमजोर पाठक हुँ ।
थाकेर, लडेर, भत्किएर पनि फेरि अंगालो मारेर पर–परको डाँडा हेरेर आगामी जीवनको दुर्दशा केलाइरहेका सुक्मती र डुक्पाको आँखामा पो पाइएला कि त्यो झिल्को ? उपन्यासले उत्पन्न गर्ने स्वतःस्फूर्त प्रश्नहरू हुन्– जुन समान संघीय संस्थानको स्थापना खोजिएको थियो, बराबरी शासनको जुन परिकल्पना थियो, जुन रूपान्तरणको खाका बनाइएको थियो, जुन कट्टर धार्मिक, सांस्कृतिक दादागिरीभित्र अरू उप–संस्कृति, धर्म किनारमा परेको थियो, त्यसको मार खपेकाहरू लारुम्बामा किन सन्त हुन पस्छन् ?
मार्ने राजनीति र बचाउने धर्म भन्ने मनोसमाज खतरनाक हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसलाई कसले संस्थागत गरेको हो ? लिम्बूगाउँको बोलीचाली त आयो, पूर्वीय भाषाको मिठास त आयो, तर लिम्बूहरूले केन्द्रमा स्थापित हुनका लागि गरेको लडाइँ कहाँ छ ? जे थियो, त्यही ठीक थियो कि जे ठीक थिएन त्यो ठीक गर्न लड्नुपर्छ ? यो विषय उपन्यासले कहाँनेर भनेको छ ?
जसरी हिन्दु राजाले उप्रान्तका सबै धर्मलाई छोपेर हिन्दुकरण गरे, के त्यसरी नै लिम्बू गाउँका अलिम्बूहरू लिम्बू संस्कृतिमा (प्रभावमा) लपक्क भिजेका हुन् ? समावेशी संस्कृतिले छपक्क भिजेको फूलको पत्र चुँडाल्ने आँधी थियो त माओवादीहरूले लडिरहेको लडाइँ ? क्रान्तिसित फेदकाहरू केन्द्रमा पुग्नुपर्छ भन्ने चेतना निर्माणका लागि चाहिने प्रभावकारी पहुँच थिएन ?
विशाल क्यानभासमा जसरी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक प्रेम ध्वस्त बन्यो, ‘महाभारा’ त्यसैको कथा पो हो कि ? तर, कसै गरे पनि त्यो डुक्पा र सुक्मतीको प्रेमको कथा त होइन । न त ट्रक ड्राइभरको कथा हो । न माओवादीको कथा हो । न त सरकारी ‘म्याकनिज्म’ को कथा हो । यो शुद्ध रूपमा एउटा हारेको राजनीतिक संघर्षको कथा हो । महाहाराहरूको कथा, यो महाभारा ।
दार्जिलिङमा सन् १९८६ जुलाई २७ को दिन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १९५० को नेपाल–भारतको शान्तिमैत्री सन्धिको धारा ७ जलायो । भनियो, त्यहाँ लेखिएको ‘रेसिप्रोकल’ र ‘रैती’ शब्दले अन्याय गरेको छ । भारतले विदेशी भन्छ, नेपालले प्रवासी । भारतका गोर्खा न भारतको न नेपालको । देशमा गोर्खालाई मझधारमा पार्ने यो सन्धि नयाँ गरी बनाइनुपर्छ भनियो । तर, धारा जलाउनेहरूलाई सरकारको अर्धसैनिक बलले गोली बर्सायो, धेरै सहिद बने । सरकारको यही दमनविरुद्ध ४० दिन ४० रातको बन्द डाकियो । भनिएको थियो, दार्जिलिङमा सुंगुरले पनि नुनिया चामल खानेछ । तर, मानिसहरूले सिस्नुको जरासमेत उसिनेर खानुपर्‍यो । जनता टाट पल्टिए । दार्जिलिङमा सबै मूल्य ध्वस्त बन्यो । जबसम्म जनता ‘गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन, जेमा सम्झौता गरे पनि गरोस्’ भन्ने मनोदशामा पुगे, तब सम्झौता भयो ।
त्यस्तै राजनीतिक माखेसाङ्लोमा परेपछि जनताको सपनालाई कसरी दुर्घटनामा पारिन्छ, त्यसको हेक्का भएको दिमागले पढ्दै गर्दा ‘महाभारा’ नेपालको पूर्वीय क्षेत्रको पीडा होइन, त्यो त संसारभरिकै मानिसहरूको संघर्ष–पीडा हो भन्ने लाग्नेरहेछ । लेखकको सफलता यही आस्वादन दिनुमा हुन्छ कि ?
उपन्यासको ‘चुर’ भनेको ‘कालो’ अध्याय हो । त्यहीँदेखि नै संघर्षका जटिलताहरू स्पष्ट बन्छन्, उपन्यासको उत्कर्ष पनि कालो अध्यायबाटै सुरु हुन्छ । द्वन्द्वभित्र र बाहिर घुमिबस्ने धेरै उपन्यासहरू छन्, ठ्याक्क द्वन्द्वभित्र आम समाज र आम नागरिकका ‘मूल्य’ हरू कसरी भत्किए होलान्, कसरी बनिए होलान् भन्ने कुराको आइडियाचाहिँ ‘महाभारा’ ले दिने रहेछ ।
मैले चिनेका बसन्त पत्रकार र बौद्धिक हुन् । ‘महाभारा’ पढिसकेपछि बसन्त कताको मान्छे हो भन्ने पत्तो पाएँ । तिनी त न माओवादीको, न सेनाको, न लारुम्बाको, न लिम्बु गाउँको । बीचमा बसेर हेर्नु भनेको एकप्रकारको चलाखी हो । त्यसैले मलाई लेखक निक्कै चलाख रहेछन् भन्ने लागेको छ । दार्जिलिङको आन्दोलनभित्र डुबुल्की मार्ने लेखनाथ छेत्रीको ‘फुलाङ्गे’ जस्तै रहेछ बसन्तको ‘महाभारा’ । उनी हारेको कथा लेख्ने लेखक रहेछन् । पढिसकेर लाग्यो, द्वन्द्वले कोपरेको जीवन त डुक्पाहरूले आफैँ डिजाइन गरेका होइनन् । कसले गरेको हो त ‘महाभारा’ भित्रको जीवनको डिजाइन् ? बसन्तले ? होइन त्यहाँको राजनीतिले । कस्तो राजनीति ? त्यही बुझ्न त पढ्नुपर्ने रहेछ बढो चलाख लेखकको सचेत उपन्यास– महाभारा ।
प्रकाशक–लेखकले ‘महाभारा’ लाई प्रेमको कथा भनेका छन् । तर, मलाई ‘महाभारा’ प्रेमको कथा फिटिक्कै लागेन । प्रेम त औजार मात्र हो, थपना मात्रै हो । किनभने प्रेमका लागि न डुक्पाले संघर्ष गरेको छ, न सुक्मतीले । यहाँ आकर्षण छ, त्याग छैन । यसरी बुझ्दा हुन्छ, उनीहरूको प्रेम खोलामा खस्यो, त्यसलाई छालले यत्तै हुत्त्यायो, उत्तै हुत्त्यायो । भएको यत्ति हो । पौडिन नजान्ने प्रेम उपन्यासमा राखेर प्रेमको उपन्यास भनिदिने ?
उपन्यासका पात्रहरू सिनित्त परेको भाषामा बोल्छन् । वास्तवमा कविहरू पनि त्यतिको सिनित्त परेको भाषामा बोल्दैनन् । ‘महाभारा’ कै विमोचनमा कवि उपेन्द्र सुब्बा बोलेको हेरियो भने थाहा लाग्छ, सुब्बा सेक्मुरीजत्तिको पावरफुल बोलेनन् । यस्तो लाग्छ, सुक्मतीले कविता लेखी भने उपेन्द्र सुब्बाहरू किनार लाग्नेछन् ।
सहरमा जस्तो बस्तीमा मानिसहरू पलिस लगाएको भाषामा बोल्दैनन् ।
प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०९:५३